KHILAAF SIYAASADEED OO HEER XUN KAMARAYA SOOMAALIYA | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
KHILAAF SIYAASADEED OO HEER XUN KAMARAYA SOOMAALIYA
Muqdisho SUNDAY, APRIL 8TH, 2012 – (MMG)- Raysil wasaaraha Soomaaliya Prof. C/wali Maxamed Cali oo dhawaan ka badbaaday qarax la doonayay in lagu dillo oo ka dhacay Tiyaatarka Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu adkeeyay amaanka qeybta uu ku hoydo ee guriga uu ka daganyahay Muqdisho. Waxaana soo ifbaxaya macluumaad sheegaya feejignaan xoogleh iyo shaki uu ka qabo madaxda qaar.
Madaxweyne Shariif Sh Axmed ayaa dhankiisa jeediayay hadallo uu ku dajinayo xaalada kadib qaraxii shakiga dhaliyay ee ka dhacay Tiyaatarka Golaha Murtida.
Dad kudhow madaxweynaha ayaa sheegay in Shariif mudo dheerba aysan isku wanaagsaneyn raysil wasaarihiisa inkasta uusan C/wali jeedin hadal adag oo cadaynaya khilaafka isaga iyo madaxweynaha.
Laakin wuxaa la sheegayaa in raysil wasaaruhu aaminay inay wada socdaan khilaafka madaxweynaha iyo qaraxii Tiyaatarka ee uu kabadbaaday ahaana mid loogu talo galay in lagu qaarajiyo.
Mid kamid ah dadka ka agdhow Raysil wasaaraha ayaa sheegay in xiriirka Madaxweynaha iyo Raysil wasaaruhu uu marayo meel xun,iyada oo ciidamo hor leh oo ilaaliyo amaankiisa ay soo dhoobteen qeybta uu daganyahay Raysil wasaaraha.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan M. Maxamuud oo aan dhankiisa soo saarin wax hadal ayaa la sheegayaa inuu udiray Muqdisho ciidamo ilaaliyo Raysil wasaaraha. Ilo wareed kusugan Garowe ayaa sheegaya in ciidamada loo diray Raysil wasaaraha ay yihiin kuwo si gaar ah u tababaran.
Lama hubo heerka ay gaarsiisantahay xasaasiyadda siyaasadeed ee ka dhalatay isku daygii dil ee Raysil wasaare C/wali Gaas .
Dad aqoon u leh amaanka ayaa sheegaya in qaraxii Tiyaatarka uu yahay mid ay kulug lahaayeen hay’ada nabad sugida Soomaaliyeed oo laga yaabo inayba fuliyeen. Inkasta oo ay eedaasi iska fogeeynayaan hay’adaha qaabilsan amaanka.
Si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda ayay Soomaalida u dhaga taagayaan warka laga soo sheegi doono madaxtooyada Soomaaliya oo ay wada daganyihiin madaxda Soomaalidu.
Halkan ka Dhageeyso
Comment by Moment Media Group on April 9, 2012 1:14 am
XILDHIBAANADA TAAGEERSAN MADOOBE NUUNOW MAXAMAD OO BILAABAY QABASHADA ARAAJIDA MUSHARAXNIMADA MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA
Xildhibaanada Baarlamaanka gaar ahaan kuwa taageersan inu yahay Madoobe Nuunoow Maxamad Gudoomiyaha Baarlamaanaka, ayaa waxa ay bilaabeen inay qabtaan araajida muhsaraxiinta xilka madfaxtinimo ee Soomaaliya, iyadoo maalmo ka hor sameeyay gudiga qaban qaabada doorashada.
Gudiga loo doortay qaban qaabada shirka ayaa soo saaray shuruudaha looga baahan yahay qofka qabanay xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya, waxcayna sidoo kale xuseen in laga bilaabo maalinti shalay ee Taariikhdu ahayd 7/4/2012 ay bilaabatay qabashada araajida waxayna sheegeen inayb socon doonto ilaa 21/4/2012.
Xildhibaan Ismaaciil Axmed oo ah Gudoomiyaha Gudiga Doorashada ayaa sheegay inay soo saareen habka iyo jadwalka uu ku soconayo Doorashada, isagoo sheegay in doorashada ay dhici doonto 30/4/2012.
” Shuruudaha qofka qabanay xilkan waa inuu yahay Soomaal, Muslim, Da’diisu ay tahay 40 Jir ” waxaa sidaa yiri xildhibaanka oo ah Gudoomiyaha gudiga doorashada ay ku dhawaaqeen qaar ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada taageersan Madoobe Nuunoow Maxamad ayaa wada olole ay ku qabanayaan doorashop dalka ka dhacada, iyagoo sheegay inay yihiin baarlamaanka sharciga ah ee jira.
Dalka Soomaaliya ayaa ah mid wajahaya marxalado siyaasadeed oo qasan, waxaana dhibaatada ugu weyn ay heysataa dadka rayidka ah
Waxaana hada dalka uu galaya xaalad siyaasadeed oo jahwareersan, iyadoo xildhibaanada ay kala jaban yihiin waxaana u sii dheer dagaalka uga imaanaya dhanka Alshabaab oo u muuqda kuwa hada bilaabay qaraxyo hor leh.
AUN Mowliid Macaane oo Galabta Lagu Aasay Magaalada Nairobi Iyo Madax Heer Qaran oo ka Qeybgalay Aaska (Taariikh Koobaan) Kooxda Qaylo-Dhaan oo dhowaan saareysa Hees cusub oo loogu magac daray Qaylo-dhaan2.